Ozi kachasị ọhụrụ banyere Federal Airport Authority of Nigeria from Nigeria & world | TAA
1, 296 IDPs na-ebute ọrịa ọgbụgba na Yobe
UN na-agba Gọọmenti Plateau ume ka ọ bụrụ iwu gbasara oke nhata
Home Tags Federal Airport Authority nke Nigeria
Federal Airport Authority nke Nigeria
ICAO: Mkpesa dị ukwuu, mkpesa nke ịkpa ókè nke ndabere nke ụgbọelu Africa
Òtù Mba Ndị Na-ahụ Maka Ọgbọ Na-ahụ Maka Mba Nile (ICAO) na Tuesday kwuru ebubo oke na ịkpa ókè nke mba na-egbochi mmepe nke ụgbọelu n'Africa.
SGF: Ụzọ mgbochi ụgbọelu ga-eme ka ụba akụ na ụba
Gọọmentị Gọọmenti kwuru na mmezu zuru ezu nke Nigeria Aviation Sector Roadmap ga-eme ka mgbanwe nke azụmahịa na akụ na ụba na mpaghara.
Mbono ala: Gomenti gọọmenti gbara ume ka ị tụlee mmasị ndị ọrụ
Ulo oru ugbo abuo na Monday gwara ndi isi ochichi Federal ka ha chee echiche nke ndi oru n'oru a ka o na-aga n'ihu iji kwado ala isi ala anọ di na mba.
Ọbịbịa Buhari nleta: Ndị njem na Lagos, ndị njem na-ebelata ụzụ
Ndị njem ụfọdụ na ndị njem na Thursday, a manyere ha ịga ebe dị anya na Murtala Muhammed Airport, Lagos iji nweta ụgbọelu ha, na-esochibido ịgagharị gburugburu ọdụ ụgbọ elu site n'aka ndị ọrụ nche.
Ndi Naijiria 611 si na Libya laghachi na March
National Emergency Management Agency (NEMA) na Wednesday kwuru na ngụkọta nke ndị 611 ndị Naijiria jiri obi ha laghachiri na Libya na March.
Minista: FAAN nchebe ụgbọelu na-ebu agha n'oge na-adịghị anya
Minista State for Aviation, Sen. Hadi Sirika, na-ekwu na ndị ọrụ AVICEC (AVSC) nke Federal Federal Authority of Nigeria (FAAN) ga - enye ikikere iji ebu ogwe aka iji kwado ndị ọrụ ndị ọzọ iji merie egwu egwu.
NEMA na-anata 149 Nigerians si Libya
National National Emergency Management Agency (NEMA) anatawo 149 ndị Naijiria bụ ndị si na Libya laghachi azụ.
FAAN automates njem collection ọrụ
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọchịchị Federal nke Nigeria ejirila nchịkọta Ọrụ Ndị Ọrụ Ụgbọ njem na mpaghara ọdụ ụgbọelu dị na mpaghara mba ahụ.
FAAN amalite asambodo nke ọdụ ụgbọelu anọ
Onye isi ulo oru Federal Authority of Nigeria (FAAN) kwuru na ọ malitere usoro nke igosi Aminu Kano International Airport, Airport Kaduna International, Port-Harcourt International Airport na Akanu Ibiam International Airport, Enugu.
FAAN ego na ụgwọ ọrụ ọrụ ụgbọelu kụrụ N38bn na 2017
Mr Saleh Dunoma, Director General, Federal Authority of Nigeria (FAAN) na Monday kwuru na ikike nyere N38 ijeri site na Ọrụ Ndị Ọrụ Ọrụ (PSC) na 2017.
FAAN nche jidere ndị ọrụ NIS abụọ maka ịnwa ịzụ ahịa mmadụ
Ndi oru nchekwa si n'aka Federal Authority of Nigeria (FAAN) nke tinyere aka na Airport nke International Murtala Muhammed (MMIA) Lagos na Thursday jidere ndi oru abuo site na NIGC Nigeria Immigration Service (NIS) maka igbali ahia umuaka umuaka Naijiria site na mba a. ọdụ ụgbọelu.
FAAN na-enyocha ntinye aka na-ezigara ọrụ maka nchebe nchebe na ọdụ ụgbọelu
Enwere atụmatụ site n'aka Njikwa Ọdụ Ụgbọelu nke United States (FAAN) ka ị nyochaa ugbu a n'ụzọ zuru ezu ndị na-erite uru nke Ụlọ Ọrụ Ọrụ (ODC).
Ụmụ nwanyị anọ dị ime, 140 ndị ọzọ ndị Niger si Libya laghachi
Ulo nke ndi 144 ndi Naijiria, tinyere umuaka di ime, onwa Thursday weghachitere onwe ha site na Libia site n'enyemaka nke International Organization for Migration (IOM) na European Union (EU).
FAAN kwere nkwa ijide ugboelu ugbua na ntinye ego 2019
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọ mmiri nke Nigeria (FAAN) na-ekwu na ọ na-eme atụmatụ ịmepe ịgba gburugburu ebe ọ dị na ọdụ ụgbọelu ya na mba ahụ iji mee ka nchekwa na nchebe nke ụgbọ elu na ndị njem.
Lower patronage hits Dana Air dị ka Port Harcourt Airport reopens maka arụmọrụ
Ulo oru onodu ugbua na-amaliteghachi n'ehihie nke mbubreyo n'ututu International Airport Port Harcourt mgbe emechibidoro ihe ndi mere na mgbede Tuesday gara aga mgbe Dana Air nwere nsogbu di nso mgbe ugbua ya si na Abuja gbapuo n'okporo uzo ma mechie n'ime ohia.
Ndị obodo FCT na-ekwusi ike inweta ụlọ mmiri
Ndị bi n'ógbè ụfọdụ dị na Federal Capital Territory (FCT), na Wednesday gosiri na ha enweghị ike ịnweta naanị mmiri iyi n'ebe ahụ.
Ndị FAAN na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọelu na-ebuso ụmụ anụmanụ agha
Ndi isi ulo oru nke United States (FAAN) kwuru na o kwusiri isi ulo nche na Akure Airport, Ondo State, mgbe umu ehi rutere n'ọdụ ụgbọ elu, na-agbagha oru ozo.
FAAN na-arịọ mgbaghara ka ehi na-awagharị ụgbọ oloko Akure
Otu ìgwè ehi na-agba ọsọ na ndagwurugwu Akure Airport n'ụtụtụ a, na-egbochi ụgbọ elu ụgbọelu nke Lagos site na ọdịda.
Ex-Manchester United onye nchịkwa Louis van Gaal kwadoro maka ịlaghachi na njikwa afọ abụọ
Onye isi na Manchester United, bụ Louis van Gaal, kwuru na ya nwere ike ịbịaru nso na njikwa mgbe ọ natara ihe dị mma ịjụ.
Onye Nigeria na-egbu Sadiq Umar kwenyere na ya ga - enwe ihe dị iche na - enye ma ọ bụrụ na ọ na - azụ ya site na nchịkwa Gernot Rohr na - eduga ndị Super Eagles na Russia.
Ndị na-eme ihe ngosi na-agba ọsọ Lagos na-ekpe ikpe na-akwụ ụgwọ ọkụ eletrik
Ọnụ ọgụgụ karịa ndị na-emegide 300 na Monday nọchibidoro ogige Ụlọikpe Kasị Elu Federal na Lagos iji mee ka ọnụ ọgụgụ ọkụ eletrik dị elu.
Angela Merkel Germany na-agba ụmụ akwụkwọ ume ka ha tụlee ọrụ 'nwoke'
N'ịdị n'ihu nke Ụbọchị Ndị Nwanyi nke Mba, Onye Germany Chancellor Angela Merkel na Wednesday, na-agba ndị na-agụ akwụkwọ ume ịtụle ọrụ 'nwoke'.
Gọọmenti El-Rufai na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka nchịkwa PDP na 2019 - Sani ...
Dr Muhammad Sani-Bello, onye isi ochichi nke ndi isi ochichi nke di na State Kaduna, kwuru na ndi ochichi nke Gov. Nasiru El-Rufai mere ka o di mfe ka ndi ochichi laghachi na ike 2019.
Ekiti Ekiti: REC na-ekwusi egwu maka ndụ
Kọmitii Electoral App (REC) dị na Ekiti, Prof. Abdulganiyu Raji, na Thursday kwuru na ọ bụ egwu ndị mmadụ na-atụ egwu ya.